नियात्रा : चिंगिज आइतमातभ
नेशनल म्यूजियमबाट फर्कदै गर्दा अगाडिको ठूलो पार्कमा एउटा विशाल पूर्ण कदको मूर्ति उभिएको थियो । ‘यो कसको मूर्ति हो ?‘ सेप्टेम्बर २५ को अपरान्ह मलाई बिस्केक शहर घुमाउन हिँडेका जोयललाई सोधेँ । उनले भने, ‘चिंगिज आइतमातभ ।‘‘चिंगिज आइतमातभ ?‘ मैले उल्टै प्रश्न गरेँ उनैलाई । आइतमातभको नाम उनले यसरी भन्लान् भन्ने कल्पनासम्म पनि गरेको थिइन ।‘हो, आइतमाभत । उनी हाम्रा राष्ट्रिय नायक (नेशनल हिरो) हुन् ।‘ जोयलले फेरि भने ।मेरो मन आनन्दले एकाएक फुर्फुर भयो । आदर र एउटा लोभले मैले एकछिन त्यो मूर्तिलाई नियालेर हेरेँ । मूर्तिको अनुहारलाई नियालेर हेरेँ । मेरो मनमा एकाएक बीसौँ वर्ष अगाडि पढेको किताबको एउटा दृश्य झल्झली भएर आयो । त्यो ताजा दृश्यले म मोहित भएँ एकछिन ।एउटा बूढो किसान गुल्सारी नामको घोडा पालेर बसेको छ । त्यो घोडा उसको साथी पनि हो, वाहन पनि हो, कमाइ खाने भाँडो पनि हो । उनीहरू दुईको मित्रता अत्यन्त निकटको छ र एउटा बिना अर्को अपूरो हुने अवस्थामा दुवै छन् । यस्तोमा एक पटक घोडा दौड प्रतियोगिता हुन्छ । त्यो निकै प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा गुल्सारी पनि दौडन्छ । बूढो किसानको सम्पूर्ण विश्वास र सपना गुल्सारीको गतिमा अडेको हुन्छ । अनेकौँ घोडाहरू धूलो उडाउँदै दौडदै गर्दा त्यही धूलोसँगै मानिसहरूको कोलाहल, सुसेली र थपडीको आवाज पनि गुञ्जन्छ । जसै गुल्सारी बिस्तारै अघि बढ्दै जान्छ एकपछि अर्को घोडालाई पछि पार्दै, सम्पूर्ण वातावरण गुञ्जायमान हुन्छ एउटै आवाजले — गुल्सारी, गुल्सारी । र, यसरी गुल्सारीले दौड जित्छ । यो दृश्य चिंगिज आइतमातभले लेखेको गुडबाई गुल्सारी भन्ने किताबको बूढो र घोडा शीर्षकमा गरिएको नेपाली अनुवादमा पढेको हुँ । उनको एउटै किताबको पढाइबाट नै म उनको लेखनको शक्तिले अति प्रभावित छु । चिंगिजको कलमको शक्तिले नै हो, यतिका वर्षपछि पनि म उक्त दृश्यलाई एकदम ताजा रूपमा स्मरण गरिरहेको छु ।‘ चिंगिजको पूरै फोटो आउने गरी मेरो फोटो खिच ।‘ मैले जोयललाई उनले बुझ्ने गरी भनेँ ।उनले दुई तीन किसिमले फोटो खिचे । म चिंगिजको मूर्तिको तल एकछिन त्यत्तिकै बसिरहेँ चूपचाप । यो अचानक एकजना प्रसिद्ध लेखकलाई भेट्दाको एउटा सुखद आश्चर्य थियो ।मैले चिंगिजलाई आजसम्म रुसी लेखक भनेर चिनेको थिएँ । हुन पनि सोभियत संघको समयमा उनी रुसी भाषा हुँदै अन्य भाषाहरूमा गएका हुन् । संसारका १ सय ५० भाषाहरूमा अनुवाद हुँदा उनी सामान्यतः रुसी लेखककै रूपमा चिनिए । तर यहाँ आएपछि उनको नयाँ परिचय पाएँ । उनी किर्गिज हुन् र सबै किर्गिजका हृदयमा बसेका राष्ट्रिय नायक हुन् ।किर्गिस्तानमा दुई जना व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय नायकको सम्मान प्राप्त भएको रहेछ । पहिलो मानस भए । दोस्रोचाहिँ प्रसिद्ध साहित्यकार चिंगिज आइतमातभ । मानस संसारको सबैभन्दा ठूलो महाकाव्यका नायक एउटा वीरता, धीरता र एकताका प्रतीक मिथक थिए भने चिंगिज आइतमातभ वास्तविक मान्छे थिए । नेशनल म्यूजियमको प्राङ्गणमा एउटा बलियो कालो घोडामा चढेको मानिसको विशाल मूतिको अगाडि ठूलो बाटो थियो र त्यसभन्दा पनि अगाडिको पार्कमा विशाल पूर्ण कदको मूर्ति खडा थियो । त्यो मूर्ति चिंगिज आइतमातभको रहेछ । यसरी दुई राष्ट्रिय नायकहरूलाई राजधानी शहरको मुटुमा रहेको विशाल पार्कको दुई छेउमा आमनेसामने पारेर राखिएको रहेछ । बाँकी दुईतिर अर्ध वृत्ताकार घरहरू थिए । खुला ठाउँतिर जता फर्के पनि राष्ट्रिय नायकलाई देखिने रहेछ ।अर्को दिन हामी इन्टरनेशनल पेन ८० औँ कंग्रेसमा भाग लिन आएका साहित्यकारको सम्मानमा टर्किस मानस विश्वविद्यालय र इन्टरनेशनल अटार्टूक अलाटु विश्वविद्यालयमा दुइटा कार्यक्रम राखिएको थियो । ती दुवै कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकूलपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, सेन्ट्रल एशिया पेनकी अध्यक्षदेखि अन्य प्राज्ञिक वर्गले समेत चिंगिज आइतमातभको अति नै प्रशंसा गरे । किर्गिस्तान् १९९१ मा स्वतन्त्र देश भएपछि चिंगिज किर्गिस्तानको तर्पmबाट यूरोपियन यूनियन, यूनेस्को, बेल्जियम, लक्जम्बर्ग, नेदरल्याण्डजस्ता विभिन्न देश र निकायमा किर्गिस्तानको तर्पmबाट राजदूत समेत भएका रहेछन् । रुसी र किर्गिज दुवै भाषामा लेख्ने चिंगिज सोभियतकालमा लामो समय मस्कोमा बसेका रहेछन् । तर उनी जन्मेको किर्गिस्तानकै इस्सिककुल नजिकै रहेछ र स्वतन्त्रतापछि उनी बिस्केक शहरमै आएर बसेका रहेछन् ।सेप्टेम्बर ३० मा आयोजित टर्किस मानस विश्वविद्यालयको प्रवचन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा उभिएका विश्वविद्यालयका डिनले आइतमातभको बारेमा भने – ‘आइतमातभले धेरै जटिल जीवन बिताए तर त्यसैबाट उनले देशको लागि केही ल्याए । म उनी सँगसँगै बसेको छु धेरै समय । आइतमातभले यस क्षेत्रको, यो माटोको यथार्थलाई वास्तवमा बुझेर लेखे । उनी किर्गिजमा लेख्थे र रूसीमा अनुवाद हुन्थ्यो । वास्तवमा उनको प्रतिभा जति हो संसारले उनलाई त्यति चिनेन ।’ साथै, किर्गिजहरू भने बीसौँ शताब्दी आइतमातभको समय हो समेत भन्दा रहेछन् र उनको निधन भएपछि त्यो ठाउँ अहिले खाली भएको मान्दा रहेछन् ।अर्का वक्ताको रूपमा उभिएकी किर्गिस्तानकी भूतपूर्व राष्ट्रपति रोजा ओतुनबायेभाले भनिन् – “मैले विदेश मन्त्रालयमा काम गर्दा उनी विदेशमा राजदूत थिए । उनी सबैका प्रिय थिए र महान थिए । वास्तवमा आइतमातभ अझै हामीसँगै छन् । अंग्रेजहरूले शेक्सपियरलाई धन्यवाद दिएजस्तै हामी आइतमातभलाई धन्यवाद दिन्छौँ । आइतमातभका केही नाटकहरू अझै प्रदर्शन भएका छैनन् । उनका केही किताब अझै अनुवाद हुन सकेका छैनन् । साहित्यमा हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । अनुवादले हामीलाई एकअर्कालाई बुझ्न मद्दत गर्छ । हामी एकअर्कालाई भेटौँ । हामी एकअर्कासँग कुरा गरौँ । हामी एकअर्कासँग मिलेर काम गरौँ ।”अर्का वक्ता जो आफू पनि पछिल्लो पिँढीका लेखक थिए (मैले उनको नाम बिसिएँ), भने, ‘जब मैले किताबहरू पढ्न थालेँ, आइतमातभ क्लासिक भइसकेका थिए । मैले पहिलोपल्ट उनको किताब जमिलाको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनलाई नजिकैबाट हेरेको हुँ । म एकदम रोमाञ्चित भएको थिएँ । पछि मैले उनका सबै किताब पढेँ । उनको प्रत्येक किताब मेरो लागि महान र प्रेरणादायी थियो । पछि जब मैले समीक्षा लेख्न थालेँ, म सधैँ उनको नयाँ किताबको प्रतीक्षामा हुन्थेँ । मैले उनलाई भेटेको छु । उनी जुन काम गर्थे, पूरा उत्साह र समर्पणका साथ गर्थे । वास्तवमा उनलाई आलोचना गर्न कुनै पनि आलोचकलाई सजिलो थिएन ।‘पेन इन्टरनेशनलको यस कंग्रेसकी मुख्य आयोजक सेन्ट्रल एशियन पेनकी अध्यक्ष डालमिरा तिलेप्बर्गेनले पनि चिंगिजको बारेमा प्रशंसाको निकै वाक्यहरू बोलिन् । उनले एक ठाउँ भनिन् – “आइतमातभले कहिल्यै आफूलाई ठूलो लेखक ठानेनन् । ठूलो मान्छेको विशेषता पनि यही नै हो ।” मैले उनको कुरालाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गरेँ र फेरि उनलाई सुन्न थालेँ । ‘अर्को कुरा, आइतमातभ लेखनमा परिमार्जन पनि थुप्रै गर्थे ।’वास्तवमा डालमिराले चिंगिजको प्रशंशा मात्र गरिनन्, चिंगिजलाई माध्यम बनाएर साहित्यमा परिमार्जनको महत्वको बारेमा पनि भनिन् । कुनै पनि रचना लेखिसक्ने बित्तिकै लेखकलाई एकदम राम्रो लाग्नु स्वाभाविक हो, तर केही समयको अन्तरालमा फेरि त्यही रचनालाई ध्यानपूर्वक पढ्ने हो भने त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँहरू भेटिन्छन् । असल लेखकले प्रकाशनको लागि ज्यादै हतार पनि गर्नु हुँदैन ।यसैगरी, इन्टरनेशनल अतातुर्क अलातु विश्वविद्यालयमा अक्टुबर १ को साँझ भएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा किर्गिस्तानका एक जना नाटककार तथा निर्देशकले पनि आइतमातभको दिल खोलेर प्रशंसा गरे र आफूले उनीबाट धेरै सिक्न पाएको बताए ।चिंगिज आइतमातभ लोकजीवन र लोककथाबाट विषयवस्तु टिपेर समकालीन सामाजिक जीवनसँग तादात्म्य कायम गरी पुनर्रचना गर्ने क्षमता भएका लेखक थिए । उनका रचनाहरूमा जनावरहरूसँगको अति निकट सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । गुडबाई गुल्सारीमा घोडा एउटा शक्तिशाली चरित्र भएर आएको छ भने द डेज लास्ट मोर देन अ हन्डेड इयर्समा ऊँटलाई विषयवस्तु बनाएका छन् । किर्गिजहरूको जीवनको दैनिकीलाई छपक्कै बोकेर उपन्यासमा उतारेको जस्तो ज्यादै स्वाभाविक र वास्तविक लाग्छ उपन्यास । त्यसै भएर नै किर्गिजहरू उनीहरूको आँसु र हाँसोलाई, उनीहरूको मनको कुरालाई जीवन्त रूपले लेख्ने लेखक भनेर चिंगिजलाई हृदयहृदयमा बोकेर हिँड्दा रहेछन् । मलाई उनको प्रेम विषयमा लेखिएको जमिला उपन्यास पनि पढ्न मन लाग्यो । मैले यो कुरा मेरी साथी ऐसाल्किनलाई भनेँ । उनले म पुस्तक पसलमा गएर अंग्रेजीमा छापिएको जमिला किनेर ल्याउँछु तिम्रा लागि भनिन् ।किर्गिस्तानमा टर्की भाषाको पनि निकै प्रभाव रहेछ । छिमेकी देश मात्र नभएर भाषामा पनि धेरै समानता रहेको र अन्य सामाजिक, आर्थिक सम्बन्ध पनि गाढा रहेको एउटा प्रमाण त यो विश्वविद्यालयको नाम नै टर्कीसँग जोडिएको, विश्वविद्यालयमा किर्गिस्तान र टर्की दुवै देशको झण्डा राखिएको र यस विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण खर्च टर्कीले व्यहोर्ने गरेकोबाट पनि देखिने रहेछ । यति मात्र होइन, सन् २००८ मा टर्कीले साहित्यको नोबेल पुरस्कारका लागि चिंगिज आइतमातभलाई तुर्की भाषाको लेखकको रूपमा नोमिनेसन गरेर पठाएको समेत रहेछ । यसबाट चिंगिज तुर्की भाषामा पनि राम्रो दखल राख्थे भन्ने बुझियो ।चिंगिज ७९ वर्षको उमेरमा मिर्गौलाले काम नगरेपछि जर्मनीमा औषधोपचार गर्न गएका थिए । त्यहीँ नै उनको जून १०, २००८ मा मृत्यु भयो । त्यसपछि शोक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै प्रसिद्ध पत्रिका गार्जियनले १५ जुलाई २००८ को अंकमा चिंगिजलाई ‘इमान्दार हृदय र दार्शनिक मन भएको लेखक’ भनेको छ । किर्गिस्तानमा उनको सम्झनामा उनको नाममा एउटा संग्रहालय बनाइएको छ जहाँ उनका पुस्तकहरू, उनका पाण्डुलिपिहरू, कलम, कुर्सीटेबुल लगायत उनले दैनिक प्रयोगमा ल्याएका अनेकौँ सामग्री राखिएका छन् जसले चिंगिजको सम्झनालाई सदैव मनमा जगाइराख्छन् ।चिंगिजको यति धेरै प्रशंसा सुनिरहँदा मनमा एउटा उत्सुकता पनि उठेकै हो । के किर्गिस्तानमा अर्को लेखक छैन जसलाई हामी त्यति नै उत्सुकतासाथ पढ्न सकौं ? वा चिंगिजको विशाल वृक्षको छायाले अन्य समकालीन वा पछिल्ला साहित्यकारहरूलाई धेरै सेप लागेको हो ?मैले आइतमातभको प्रशंसा जति धेरै ठाउँमा जति धेरै किसिमले सुन्दै गएँ त्यति नै हाम्रा महाकवि देवकोटा याद आइरहे । के हामी कसैले देवकोटा वा अरू कुनै महान् नेपाली साहित्यकारलाई खुलेर यति धेरै प्रशंसा गर्छौं ? हामी हाम्रा कुनै साहित्यकारलाई यति धेरै सम्मान र आदर गर्छौं ? हामी आफ्नो अहंलाई आपूmबाट बाहिर राखेर अर्को लेखकको रचनालाई पढ्छौँ ? र, त्यहाँभित्र भेटिएका राम्रा र जीवनोपयोगी कुराहरूलाई आत्मसात् एवं प्रसारण गर्छौं ?मभित्र प्रश्नहरू उठिरहे ।
११ आश्विन २०७६, शनिबार १४:४५
नेशनल म्यूजियमबाट फर्कदै गर्दा अगाडिको ठूलो पार्कमा एउटा विशाल पूर्ण कदको मूर्ति उभिएको थियो ।
‘यो कसको मूर्ति हो ?‘ सेप्टेम्बर २५ को अपरान्ह मलाई बिस्केक शहर घुमाउन हिँडेका जोयललाई सोधेँ ।
उनले भने, ‘चिंगिज आइतमातभ ।‘
‘चिंगिज आइतमातभ ?‘ मैले उल्टै प्रश्न गरेँ उनैलाई । आइतमातभको नाम उनले यसरी भन्लान् भन्ने कल्पनासम्म पनि गरेको थिइन ।
‘हो, आइतमाभत । उनी हाम्रा राष्ट्रिय नायक (नेशनल हिरो) हुन् ।‘ जोयलले फेरि भने ।
मेरो मन आनन्दले एकाएक फुर्फुर भयो । आदर र एउटा लोभले मैले एकछिन त्यो मूर्तिलाई नियालेर हेरेँ । मूर्तिको अनुहारलाई नियालेर हेरेँ । मेरो मनमा एकाएक बीसौँ वर्ष अगाडि पढेको किताबको एउटा दृश्य झल्झली भएर आयो । त्यो ताजा दृश्यले म मोहित भएँ एकछिन ।
एउटा बूढो किसान गुल्सारी नामको घोडा पालेर बसेको छ । त्यो घोडा उसको साथी पनि हो, वाहन पनि हो, कमाइ खाने भाँडो पनि हो । उनीहरू दुईको मित्रता अत्यन्त निकटको छ र एउटा बिना अर्को अपूरो हुने अवस्थामा दुवै छन् । यस्तोमा एक पटक घोडा दौड प्रतियोगिता हुन्छ । त्यो निकै प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा गुल्सारी पनि दौडन्छ । बूढो किसानको सम्पूर्ण विश्वास र सपना गुल्सारीको गतिमा अडेको हुन्छ । अनेकौँ घोडाहरू धूलो उडाउँदै दौडदै गर्दा त्यही धूलोसँगै मानिसहरूको कोलाहल, सुसेली र थपडीको आवाज पनि गुञ्जन्छ । जसै गुल्सारी बिस्तारै अघि बढ्दै जान्छ एकपछि अर्को घोडालाई पछि पार्दै, सम्पूर्ण वातावरण गुञ्जायमान हुन्छ एउटै आवाजले — गुल्सारी, गुल्सारी । र, यसरी गुल्सारीले दौड जित्छ । यो दृश्य चिंगिज आइतमातभले लेखेको गुडबाई गुल्सारी भन्ने किताबको बूढो र घोडा शीर्षकमा गरिएको नेपाली अनुवादमा पढेको हुँ । उनको एउटै किताबको पढाइबाट नै म उनको लेखनको शक्तिले अति प्रभावित छु । चिंगिजको कलमको शक्तिले नै हो, यतिका वर्षपछि पनि म उक्त दृश्यलाई एकदम ताजा रूपमा स्मरण गरिरहेको छु ।
‘ चिंगिजको पूरै फोटो आउने गरी मेरो फोटो खिच ।‘ मैले जोयललाई उनले बुझ्ने गरी भनेँ ।
उनले दुई तीन किसिमले फोटो खिचे । म चिंगिजको मूर्तिको तल एकछिन त्यत्तिकै बसिरहेँ चूपचाप । यो अचानक एकजना प्रसिद्ध लेखकलाई भेट्दाको एउटा सुखद आश्चर्य थियो ।
मैले चिंगिजलाई आजसम्म रुसी लेखक भनेर चिनेको थिएँ । हुन पनि सोभियत संघको समयमा उनी रुसी भाषा हुँदै अन्य भाषाहरूमा गएका हुन् । संसारका १ सय ५० भाषाहरूमा अनुवाद हुँदा उनी सामान्यतः रुसी लेखककै रूपमा चिनिए । तर यहाँ आएपछि उनको नयाँ परिचय पाएँ । उनी किर्गिज हुन् र सबै किर्गिजका हृदयमा बसेका राष्ट्रिय नायक हुन् ।
किर्गिस्तानमा दुई जना व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय नायकको सम्मान प्राप्त भएको रहेछ । पहिलो मानस भए । दोस्रोचाहिँ प्रसिद्ध साहित्यकार चिंगिज आइतमातभ । मानस संसारको सबैभन्दा ठूलो महाकाव्यका नायक एउटा वीरता, धीरता र एकताका प्रतीक मिथक थिए भने चिंगिज आइतमातभ वास्तविक मान्छे थिए । नेशनल म्यूजियमको प्राङ्गणमा एउटा बलियो कालो घोडामा चढेको मानिसको विशाल मूतिको अगाडि ठूलो बाटो थियो र त्यसभन्दा पनि अगाडिको पार्कमा विशाल पूर्ण कदको मूर्ति खडा थियो । त्यो मूर्ति चिंगिज आइतमातभको रहेछ । यसरी दुई राष्ट्रिय नायकहरूलाई राजधानी शहरको मुटुमा रहेको विशाल पार्कको दुई छेउमा आमनेसामने पारेर राखिएको रहेछ । बाँकी दुईतिर अर्ध वृत्ताकार घरहरू थिए । खुला ठाउँतिर जता फर्के पनि राष्ट्रिय नायकलाई देखिने रहेछ ।
अर्को दिन हामी इन्टरनेशनल पेन ८० औँ कंग्रेसमा भाग लिन आएका साहित्यकारको सम्मानमा टर्किस मानस विश्वविद्यालय र इन्टरनेशनल अटार्टूक अलाटु विश्वविद्यालयमा दुइटा कार्यक्रम राखिएको थियो । ती दुवै कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकूलपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, सेन्ट्रल एशिया पेनकी अध्यक्षदेखि अन्य प्राज्ञिक वर्गले समेत चिंगिज आइतमातभको अति नै प्रशंसा गरे । किर्गिस्तान् १९९१ मा स्वतन्त्र देश भएपछि चिंगिज किर्गिस्तानको तर्पmबाट यूरोपियन यूनियन, यूनेस्को, बेल्जियम, लक्जम्बर्ग, नेदरल्याण्डजस्ता विभिन्न देश र निकायमा किर्गिस्तानको तर्पmबाट राजदूत समेत भएका रहेछन् । रुसी र किर्गिज दुवै भाषामा लेख्ने चिंगिज सोभियतकालमा लामो समय मस्कोमा बसेका रहेछन् । तर उनी जन्मेको किर्गिस्तानकै इस्सिककुल नजिकै रहेछ र स्वतन्त्रतापछि उनी बिस्केक शहरमै आएर बसेका रहेछन् ।
सेप्टेम्बर ३० मा आयोजित टर्किस मानस विश्वविद्यालयको प्रवचन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा उभिएका विश्वविद्यालयका डिनले आइतमातभको बारेमा भने – ‘आइतमातभले धेरै जटिल जीवन बिताए तर त्यसैबाट उनले देशको लागि केही ल्याए । म उनी सँगसँगै बसेको छु धेरै समय । आइतमातभले यस क्षेत्रको, यो माटोको यथार्थलाई वास्तवमा बुझेर लेखे । उनी किर्गिजमा लेख्थे र रूसीमा अनुवाद हुन्थ्यो । वास्तवमा उनको प्रतिभा जति हो संसारले उनलाई त्यति चिनेन ।’ साथै, किर्गिजहरू भने बीसौँ शताब्दी आइतमातभको समय हो समेत भन्दा रहेछन् र उनको निधन भएपछि त्यो ठाउँ अहिले खाली भएको मान्दा रहेछन् ।
अर्का वक्ताको रूपमा उभिएकी किर्गिस्तानकी भूतपूर्व राष्ट्रपति रोजा ओतुनबायेभाले भनिन् – “मैले विदेश मन्त्रालयमा काम गर्दा उनी विदेशमा राजदूत थिए । उनी सबैका प्रिय थिए र महान थिए । वास्तवमा आइतमातभ अझै हामीसँगै छन् । अंग्रेजहरूले शेक्सपियरलाई धन्यवाद दिएजस्तै हामी आइतमातभलाई धन्यवाद दिन्छौँ । आइतमातभका केही नाटकहरू अझै प्रदर्शन भएका छैनन् । उनका केही किताब अझै अनुवाद हुन सकेका छैनन् । साहित्यमा हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । अनुवादले हामीलाई एकअर्कालाई बुझ्न मद्दत गर्छ । हामी एकअर्कालाई भेटौँ । हामी एकअर्कासँग कुरा गरौँ । हामी एकअर्कासँग मिलेर काम गरौँ ।”
अर्का वक्ता जो आफू पनि पछिल्लो पिँढीका लेखक थिए (मैले उनको नाम बिसिएँ), भने, ‘जब मैले किताबहरू पढ्न थालेँ, आइतमातभ क्लासिक भइसकेका थिए । मैले पहिलोपल्ट उनको किताब जमिलाको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनलाई नजिकैबाट हेरेको हुँ । म एकदम रोमाञ्चित भएको थिएँ । पछि मैले उनका सबै किताब पढेँ । उनको प्रत्येक किताब मेरो लागि महान र प्रेरणादायी थियो । पछि जब मैले समीक्षा लेख्न थालेँ, म सधैँ उनको नयाँ किताबको प्रतीक्षामा हुन्थेँ । मैले उनलाई भेटेको छु । उनी जुन काम गर्थे, पूरा उत्साह र समर्पणका साथ गर्थे । वास्तवमा उनलाई आलोचना गर्न कुनै पनि आलोचकलाई सजिलो थिएन ।‘
पेन इन्टरनेशनलको यस कंग्रेसकी मुख्य आयोजक सेन्ट्रल एशियन पेनकी अध्यक्ष डालमिरा तिलेप्बर्गेनले पनि चिंगिजको बारेमा प्रशंसाको निकै वाक्यहरू बोलिन् । उनले एक ठाउँ भनिन् – “आइतमातभले कहिल्यै आफूलाई ठूलो लेखक ठानेनन् । ठूलो मान्छेको विशेषता पनि यही नै हो ।” मैले उनको कुरालाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गरेँ र फेरि उनलाई सुन्न थालेँ । ‘अर्को कुरा, आइतमातभ लेखनमा परिमार्जन पनि थुप्रै गर्थे ।’
वास्तवमा डालमिराले चिंगिजको प्रशंशा मात्र गरिनन्, चिंगिजलाई माध्यम बनाएर साहित्यमा परिमार्जनको महत्वको बारेमा पनि भनिन् । कुनै पनि रचना लेखिसक्ने बित्तिकै लेखकलाई एकदम राम्रो लाग्नु स्वाभाविक हो, तर केही समयको अन्तरालमा फेरि त्यही रचनालाई ध्यानपूर्वक पढ्ने हो भने त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँहरू भेटिन्छन् । असल लेखकले प्रकाशनको लागि ज्यादै हतार पनि गर्नु हुँदैन ।
यसैगरी, इन्टरनेशनल अतातुर्क अलातु विश्वविद्यालयमा अक्टुबर १ को साँझ भएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा किर्गिस्तानका एक जना नाटककार तथा निर्देशकले पनि आइतमातभको दिल खोलेर प्रशंसा गरे र आफूले उनीबाट धेरै सिक्न पाएको बताए ।
चिंगिज आइतमातभ लोकजीवन र लोककथाबाट विषयवस्तु टिपेर समकालीन सामाजिक जीवनसँग तादात्म्य कायम गरी पुनर्रचना गर्ने क्षमता भएका लेखक थिए । उनका रचनाहरूमा जनावरहरूसँगको अति निकट सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । गुडबाई गुल्सारीमा घोडा एउटा शक्तिशाली चरित्र भएर आएको छ भने द डेज लास्ट मोर देन अ हन्डेड इयर्समा ऊँटलाई विषयवस्तु बनाएका छन् । किर्गिजहरूको जीवनको दैनिकीलाई छपक्कै बोकेर उपन्यासमा उतारेको जस्तो ज्यादै स्वाभाविक र वास्तविक लाग्छ उपन्यास । त्यसै भएर नै किर्गिजहरू उनीहरूको आँसु र हाँसोलाई, उनीहरूको मनको कुरालाई जीवन्त रूपले लेख्ने लेखक भनेर चिंगिजलाई हृदयहृदयमा बोकेर हिँड्दा रहेछन् । मलाई उनको प्रेम विषयमा लेखिएको जमिला उपन्यास पनि पढ्न मन लाग्यो । मैले यो कुरा मेरी साथी ऐसाल्किनलाई भनेँ । उनले म पुस्तक पसलमा गएर अंग्रेजीमा छापिएको जमिला किनेर ल्याउँछु तिम्रा लागि भनिन् ।
किर्गिस्तानमा टर्की भाषाको पनि निकै प्रभाव रहेछ । छिमेकी देश मात्र नभएर भाषामा पनि धेरै समानता रहेको र अन्य सामाजिक, आर्थिक सम्बन्ध पनि गाढा रहेको एउटा प्रमाण त यो विश्वविद्यालयको नाम नै टर्कीसँग जोडिएको, विश्वविद्यालयमा किर्गिस्तान र टर्की दुवै देशको झण्डा राखिएको र यस विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण खर्च टर्कीले व्यहोर्ने गरेकोबाट पनि देखिने रहेछ । यति मात्र होइन, सन् २००८ मा टर्कीले साहित्यको नोबेल पुरस्कारका लागि चिंगिज आइतमातभलाई तुर्की भाषाको लेखकको रूपमा नोमिनेसन गरेर पठाएको समेत रहेछ । यसबाट चिंगिज तुर्की भाषामा पनि राम्रो दखल राख्थे भन्ने बुझियो ।
चिंगिज ७९ वर्षको उमेरमा मिर्गौलाले काम नगरेपछि जर्मनीमा औषधोपचार गर्न गएका थिए । त्यहीँ नै उनको जून १०, २००८ मा मृत्यु भयो । त्यसपछि शोक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै प्रसिद्ध पत्रिका गार्जियनले १५ जुलाई २००८ को अंकमा चिंगिजलाई ‘इमान्दार हृदय र दार्शनिक मन भएको लेखक’ भनेको छ । किर्गिस्तानमा उनको सम्झनामा उनको नाममा एउटा संग्रहालय बनाइएको छ जहाँ उनका पुस्तकहरू, उनका पाण्डुलिपिहरू, कलम, कुर्सीटेबुल लगायत उनले दैनिक प्रयोगमा ल्याएका अनेकौँ सामग्री राखिएका छन् जसले चिंगिजको सम्झनालाई सदैव मनमा जगाइराख्छन् ।
चिंगिजको यति धेरै प्रशंसा सुनिरहँदा मनमा एउटा उत्सुकता पनि उठेकै हो । के किर्गिस्तानमा अर्को लेखक छैन जसलाई हामी त्यति नै उत्सुकतासाथ पढ्न सकौं ? वा चिंगिजको विशाल वृक्षको छायाले अन्य समकालीन वा पछिल्ला साहित्यकारहरूलाई धेरै सेप लागेको हो ?
मैले आइतमातभको प्रशंसा जति धेरै ठाउँमा जति धेरै किसिमले सुन्दै गएँ त्यति नै हाम्रा महाकवि देवकोटा याद आइरहे । के हामी कसैले देवकोटा वा अरू कुनै महान् नेपाली साहित्यकारलाई खुलेर यति धेरै प्रशंसा गर्छौं ? हामी हाम्रा कुनै साहित्यकारलाई यति धेरै सम्मान र आदर गर्छौं ? हामी आफ्नो अहंलाई आपूmबाट बाहिर राखेर अर्को लेखकको रचनालाई पढ्छौँ ? र, त्यहाँभित्र भेटिएका राम्रा र जीवनोपयोगी कुराहरूलाई आत्मसात् एवं प्रसारण गर्छौं ?
मभित्र प्रश्नहरू उठिरहे ।
Prevस्मरणको मानसपटलमा काभ्रेपलान्चोक
मृत्युको पनि आयु हुन्छ : डा. रवीन्द्र समीरNext